« Star Tour » Antsirabe : nandrasan’ny maro ry Stéphanie, AmbondronA, Njakatiana… | NewsMada
« Star Tour » Antsirabe : nandrasan’ny maro ry Stéphanie, AmbondronA, Njakatiana…
Ny anarana no niova ho « Star Tour »… Nahasarika olona marobe, nihoatra noho ny « THB Tour » fanao isan-taona eto Antsirabe kosa ny fety natolotra nandritra ny faran’ny herinandro teo. Ny zoma dia efa tafiditra tsikelikely tao anatin’ny fetibe ny mponin’Antsirabe sy ireo vahiny nisafidy ny hanao ny fetin’ny Paka teny an-toerana.
Ny asabotsy kosa no tena nanomboka ny lanonana, tao anatin’ny “Star Tour”. Tsy tapaka olona nanoloana ny Gara, indrindra teny amin’ireo toerana nisy ny sehatra samihafa. Fifaninanana “karaoke”, “cover”, dihy, sns, samy nahazo ny anjarany araka izay tiany avokoa.
Nandrasan’ny maro, ary nifanitsa-kitro hatrany kosa ny fampisehoana goavana isan-kariva. Nisantatra izany i Arione Joy ny asabotsy. Sehatra efa nafana no nodimbiasin’i Stéphanie, ka tsy nananosarotra firy ny nampifaly ireo mpijery. Mbola nitombo isa izy ireo ny alin’ny alahady, hijery an’i Rak Roots sy ny tarika AmbondronA. Na dia efa mpanao fampisehoana eo aza ireto farany, be mpankafy hatrany ry zalahy.
Namarana ny andiam-pampisehoana kosa i Njakatiana, omaly alatsinainy. Natao alohaloha ny fampisehoana mba nahafahan’ireo avy lavitra mankafy izany mialoha ny hamonjeny fodiana. Na izany aza anefa, tsikaritra ho nalai-nisaraka ny roa tonta, satria efa aman-taony maro tokoa no tsy nahita an’i Njakatiana an-tsehatra ny mponin’Antsirabe.
Ny fampisehoana teo ihany, fa mampiavaka hatrany ny fotoana koa ny fanentanana niandraiketan-dry Honorat sy Eric, nohatevenin’i Andry Bahrone sy ireo mpikosoka kapila. Fanombohana iny ho an’ity taona ity. Efa mitodika amin’ny fanomanana, any amin’ny tanàn-dehibe hafa sahady ny “Star Tour” sy ny “Camion Tour”.